एनसेललाई २५ अर्ब नतिराउन यी माफियाको चलखेल-Nepal Gatha
नेपाल गाथा २०७६ बैशाख १२ गते बिहीबार ०७:३५:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ मा एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि उक्त रकम नतिर्न एनसेलले सर्बोच्चमा मुद्दा हालेर अल्झाउन खोजेको छ ।
दरपीठ गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले किन दर्ता ग-यो भन्ने बिषय कानुनी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्नका रुपमा उठेको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा आफैले गरेको आदेश विपरीत कसरी एनसेललाई २५ अर्ब छल्न देलान् ? एक कानुन ब्यवसायी प्रश्न गर्छन् । पछिल्लो समयमा लाभकर कम गराउन आचार्य र तिमिल्सिनाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म चलखेल गर्दै आएका छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट ।
आज एक तोला सुनको मूल्य कति छ ?
कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय छिन्चुमा एटिएम संचालन